Ọrụ | Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd.
Agba Doppler igwe
Igwe igwe Ultrasound
Infusion mgbapụta sirinji mgbapụta
Onye ọrụ otuto
XuZhou Sunbright na-ekwe nkwa akụrụngwa ọhụụ na-abụghị ngwa nwere onwe ya pụọ ​​na ntụpọ n'ịrụ ọrụ na akụrụngwa maka oge nke ọnwa iri na asatọ (ọnwa isii maka akụkụ ahụ mapụtara) site na ụbọchị mbufe n'okpuru ojiji na ọrụ. Ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị n'okpuru akwụkwọ ikike a bụ maka ịrụzi, na nhọrọ nke ụlọ ọrụ anyị, akụkụ ọ bụla nke nyocha ụlọ ọrụ anyị gosipụtara na-adịghị mma.
Usoro Nkwupụta Ọrụ
Kpọtụrụ Ngalaba Ọrụ site na Cladị Nkwupụta Ọrụ na ihe ọmụma zuru ezu banyere nsogbu ahụ. Biko nye nọmba ụdị, akara ọgụgụ, na nkọwa dị mkpirikpi nke ihe kpatara nloghachi, foto doro anya maka igosi nsogbu bụ ihe akaebe ka mma.
Ọzụzụ Nka na ụzụ
XuZhou Sunbright na-enye teknụzụ & ọrụ ọzụzụ n'efu ndị ọrụ ntanetị & ndị ahịa nke ndị na-ekesa maka ngwaahịa ndị metụtara ya ma ga-enyekwu aka ọrụ aka site na e-mail, Skype dị ka ndị nkesa rịọrọ. A ga-enye ọzụzụ ahụ na Shanghai China. Transportationgbọ njem na ebe obibi dị na akaụntụ ndị na-ekesa ya.
N'ime oge ikike: Ndị nkesa / ndị ahịa na-ahụ maka ibu nke ngwaọrụ nke ezigara na Xuzhou Sunbright maka nrụzi. Xuzhou Sunbright bụ maka ibu si Xuzhou Sunbright na onye nkesa / ndị ahịa. Mgbe oge ikike: Onye ahịa ahụ na-ebu ibu ọ bụla maka ngwaọrụ eweghachi.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịlaghachi otu akụkụ na ụlọ ọrụ anyị, a ga-agbaso usoro ndị a: Tupu Mbupu nke ihe ahụ, nweta Mpempe akwụkwọ ikike RMA (Nweghachi Ihe). Nọmba RMA, nkọwa nke ịlaghachi n'akụkụ, na ntụziaka izipu gụnyere na RMA Form. Nọmba RMA ga-apụta na mpụga nke nkwakọ ngwaahịa. Agaghị anabata nnabata mbugharị ma ọ bụrụ na ọnweghị nọmba RMA.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara mmezi, nkọwapụta ọrụaka ma ọ bụ nrụrụ arụ ọrụ nke ngwaọrụ, egbula oge ịkpọtụrụ anyị ozugbo.
Ekwentị: +86 18616107538
Okwu: Building C6, Chinese Security Valley, Tongshan New District, Xuzhou, China